FAQs - Line Long Electronic Company Limited
LINE INTA KORONTADA
DC diirkja difaac
DC Xasaanadda darka Toxobta
DC Xasaanadda diirkja hal
diirkja EMC Common Mode ceejiya
hab caadi ah core High hadda filter faragelinta
Nanocrystalline Toxobta for transformer ee hadda
Nanocrystalline Toxobta Baxsiga Circuit jebiya
Toxobta Nanocrystalline for Power transformer
Halbeegga aasaasiga ah ee ribbon1K101
Halbeegga aasaasiga ah ee ribbon1K107
Ma waxyaabaha aad deegaanka?
Haa, our waxyaabaha diirkja deegaanka yihiin oo ay leeyihiin shahaado SGS, wax asalka aan la isticmaalayo sida qalab daahan epoxy iyo xaalado aad u leedahay Rohs iyo UL shahaado.
About diirkja size gaar ah, haddii aad ku siin kara.
Haa, haddii aad size waa gaar ah, waxaan ka dhigi kartaa in aad too.we ka fiirsan kartaa kiis furan leeyihiin mold.we saaridda kiiska, ay ka furan kartaa caaryada gudahood 2 week.So ma aha dhibaato.
Arrinta mashruuca cusub iyo waxqabadka waa mid aad u sarreeya, waxay ku siin kartaa?
Arrinta mashruuca cusub, waxaan taageeraya doonaa customer.we samayn kartaa baaritaanka iyo soo saaraan baarka aad approval.we faraxsan yihiin in ay helaan mashruuc cusub oo request.It cusub waxtar noo sidoo kale.
Haddii tayada sheyga ma aha codsigeena, sida loo sameeyo?
First, aan ka fogaano doonaa thing.we this ka dhigi doonaa baarka ka hor Dufcaddii production.After approval.we macaamiisha bilaabi doonaa production.So tayada kulmi doonaa customer.As natiijo of our jaanqaadayn qaab wax soo saarka, aan xambaarro khasaaraha macaamiisha oo dhan.
Sidee ku saabsan baakadka?
About xirmo, waxaan u hubiso in ay ammaan tahay by iibka hawada ama shipping.Our badda ganacsiga uu leeyahay waayo-aragnimo ka badan 5 sano oo export.So aad ha ka welwelin ku saabsan package.On caadiga ah ka dhigi doonaa, waxaan u isticmaali doonaa sariirtaada alaabta ilaaliyo.
Fe Salaysan Amorphous Ribbon , Emc Core, Nanocrystalline Core , Iron- Salaysan Amorphous Ribbon , qallalan Nooca transformer , Nanocrystalline Toxobta Waayo, hadda transformer ,